Maxaa ka jira inuu wadahadal u socdo Wasiir Janan iyo Dowladda Soomaaliya?. | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Maxaa ka jira inuu wadahadal u socdo Wasiir Janan iyo Dowladda Soomaaliya?.
Maxaa ka jira inuu wadahadal u socdo Wasiir Janan iyo Dowladda Soomaaliya?.
Beledxaawo:- Wasiirka amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa shaaca ka qaaday inuu bilowday wada-hadal u dhexeeyo isaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo looga hadlayo xaaladda gobolka Gedo.
Sida ay ogaatay Caasimada Online wada-hadalladaa ayaa waxa ay u dhexeeyaan wakiilo ka socda dowladda dhexe iyo saraakiil ka metaleyso wasiir Janaan, iyada oo u jeedada laga leeyahay ay tahay sidii uu ula heshiin lahaa dowladda, uguna soo noqon lahaa magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo, halkaas oo ay joogaan ciidanka Xoogga dalka.